Fikarohana momba ny firaisana Walter Semkiw, MD, Filoha mpikaroka momba ny fanambadiana masindahy Reincarnation ary manam-pahaizana momba ny Reincarnation - Fikarohana momba ny Reyncarnation
Walter Semkiw, MD, filohan'ny mpikaroka ao amin'ny Revelarnier ary ny Reincarnation Expert
Filohan'ny Ivon-toerana momba ny fampidirana ny Siansa, ny hevitra sy ny Fanahy
Walter dia hita taratra ao amin'ny Video Viraliny: Porofon'ny Reincarnation
Tsindrio ireo sariitatra hanitarana
Momba ny porofo manamarina ny amin'ny fanambadiana: Ny fahamarinana rehetra dia mandalo amin'ny dingana telo. Voalohany, voatsikera izany. Faharoa, manohitra mafy izany. Fahatelo, azo ekena amin'ny maha-izy azy. Arthur Schopenhauer
Astronomer & Skeptic Carl Sagan, 1996: "Misy fitakiana telo eo amin'ny sehatry ny [parapsychology] izay, raha ny fahitako azy, dia tokony hodinihina lalina," ny fahatelo amin'izany dia "ny ankizy kely indraindray dia milaza ny antsipiriany momba ny fiainana teo aloha, izay rehefa nanamarina dia hita fa marina ary iza no Tsy afaka nahafantatra momba ny fomba hafa noho ny fanambadiana ao amin'ny vatana vaovao indray. "
Hafatra avy amin'i Walter Semkiw:
"Araka ny asehon'ny fikarohana momba ny fanambadiana ao amin'ny vatana vaovao, dia afaka manova ny fivavahana, ny zom-pirenena ary ny firazanana isika amin'ny androm-piainany iray hafa, ny porofo momba ny fanambadiana ao amin'ny vatana vaovao indray dia hanampy antsika hihoatra ny fisainan'ny foko ary hitondra fandriampahalemana eran'izao tontolo izao.
"Ny tiako atao dia ny mampiato ny famoronana fahavalo na dia porofon'ny fanambadiana ao amin'ny vatana vaovao indray aza."
“Inona no hampitsahatra ireto herisetra mahery setra ireto? Porofo momba ny fanambadiana ao amin'ny vatana vaovao indray. "
“Miady amin'ny mariky ny kolontsaina misy antsika isika, na dia marina aza fa mitovy daholo isika rehetra, iray ihany ny fianakaviana.”
"Nitsangana tamin'ny maty tamin'ny maty isika rehetra."
"Fikarohana momba ny vatana vaovao: ny teknolojia vaovao an'ny fanahy."
"Ny porofon'ny fanambadiana ao amin'ny vatana vaovao indray dia miteraka demokrasia ara-panahy."
"Amin'ny porofo mivaingana momba ny vatana vaovao indray, dia tsy ilaina ny finoana."
Bizina Biography-Walter Semkiw, MD
Tamin'ny 1996, Walter Semkiw, dokotera mpitsabo any California, dia nanomboka nanao fikarohana momba ny fiainany taloha. Tamin'ny fanadihadiana nataony dia nivoady ny Dr. Semkiw Fitsipiky ny Reincarnation, anisan'izany ny toetoetra endrika, talenta ary filan'ny nofo mandritra ny androm-piainany mankany amin'ny hafa.
Walter no voalohany nampiasa sary nivadika mba hankasitrahana bebe kokoa ny maritrano manomboka amin'ny androm-piainana iray hafa. Nanamarika ihany koa izy fa ny olona dia miforona ao anaty vatana indray ao anaty vondrona nihaona tamin'ny olona fantatra tamin'ny fiainany taloha ary ireo fanahy dia afaka manova finoana sy zom-pirenena amin'ny fiainana iray hafa, fandinihana izay mety hitarika fandriampahalemana lehibe kokoa.
Ian Stevenson. MD dia namory tranga 1500 voamarina tamin'ny fotoanan'ny fahatsiarovana ny fiainana taloha
Tamin'ny 2001, Dr. Semkiw dia nandany andro iray niaraka tamin'ny mpikaroka mpisava lalana. Ian Stevenson, MD tao amin'ny University of Virginia, izay nanangona 1500 voamarina ny tranga fahatsiarovana ny fahazazana tamin'ny fahazazana, izay miverimberina hanaporofoana ny reincarnation. Tany Virginia, Walter dia nizara ny asany tamin'ny fikarohana ny fiainany taloha, ary koa ireo tranga hafa mitovy amin'izany. Tamin'ny faran'ny fitsidihana, ny Dr. Stevenson dia nanohana an'i Dr. Semkiw mba hanatevin-daharana ny fikambanana iray noporofoiny, ny Fikarohana ho an'ny Fikarohana siantifika.
Boky voalohany nataon'i Walter, Fiverenan'ny revolisionera, dia navoaka tamin'ny 2003 ary nifantoka tamin'ny fikarohana ny fiainany taloha. Navoaka taty aoriana izy ateraka indray, ao anatin'izany ny raharaha Stevenson lehibe naseho izay manohana ny Fitsipika Reincarnation 10 voalaza etsy ambony. ateraka indray dia ahitana ny Reincarnation Anne Frank raharaha. Ny niandohan'ny fanahy sy ny tanjon'ny fanambadiana navoaka voalohany tamin'ny 2006. Samy ateraka indray ary Fiandohan'ny fanahy niitatra nandritra ny taona maro izay, navoaka manerantany ary misy manerana izao tontolo izao.
Dr. Semkiw dia namorona ny tranokala ReincarnationResearch.com ary Takelaka Facebook Reincarnation Research, izay manana mpanaraka 100,000 mahery, ary navoakany ny Porofon'ny maha-teraka indray ao amin'ny vatana vaovao Lahatsary YouTube, manana tontolon'ny 6 tapitrisa.
Biography feno-Walter Semkiw, MD
Dr. Semkiw dia mpitsabo manam-pahaizana momba ny asa ho an'ny mpitsabo izay efa nisotro ronono tao amin'ny foibe ara-pitsaboana lehibe iray tao San Francisco, toerana niasany ho toy ny Lehiben'ny asa fanaovan-gazety momba ny fitsaboana. Talohan'izay, talen'ny fitsaboana ho an'ny Unocal 76, orinasa orinasa Fortune 500, izy.
Nianatra tany amin'ny Oniversiten'i Illinois izy, ary nahazo mari-pahaizana momba ny biôlôjia izy ary nahazo diplaoma tamin'ny Phi Beta Kappa ary niaraka tamin'ny Oniversite Honors. Taorian'ny nahazoany mari-pahaizana momba ny fitsaboana tao amin'ny Oniversiten'i Illinois, Chicago, dia nampiofana tao amin'ny University of Colorado, Denver izy.
Niditra tao amin'ny Oniversite Illinois any Illinois izy avy eo, izay nahazoany mari-pahaizana Masters of Public Health (MPH) miaraka amin'ny 4.0 avy amin'ny salan'isan'ny taom-pianarana 4.0. Ao amin'io fandaharam-pianarana io, dia nianatra ny epidemiolojia sy ny biostatistics izy, ireo fitsipika mifandraika amin'ny fametrahana porofo siantifika. Ao amin'ny sehatry ny fitsaboana amin'ny sehatry ny dokotera, dia nitifitra izy tamin'ny 99th isan-jato.
Walter dia nanomboka ny fikarohana momba ny firaisam-pinoana tamin'ny 1995 ary izy no mpanoratra Fiverenan'ny revolisionera: Niverina indray ny raharaha momba ny vatana teraka tao amin'ny vatana vaovao sy ny fanahy, izay nivoaka tao amin'ny 2003. Ao anatin'ity boky ity, dia misy fikambanana iray niorina tamin'ny vanim-potoan'ny Revolisiona Amerikanina. Nanoratra ny Filoha teo aloha Bill Clinton, mikasika ny revolisionera, "Tena mahavariana", ary ny neurosurgeon Norm Shealy, MD, PhD, dia nanoratra hoe "Mba ho tafavoaka velona amin'ny maha-olombelona, ​​ity no boky manan-danja indrindra voasoratra tamin'ny taona 2000."
Walter koa dia mpanoratra Teraka indray (Fanontana Iraisam-pirenena-2011). Fanovana hafa an'ny ateraka indray misy any India, Indonezia ary Serbia. Ao amin'ity boky ity, ireo tranga momba ny fanambadiana teraka indray miaraka amin'ny porofon'ny fanambadiana ao amin'ny vatana vaovao dia natambatra tamin'ny fifantohana amin'ny asan'i Ian Stevenson, MD ao amin'ny University of Virginia. Ny tranga azo tamin'ny alàlan'ny mpanelanelana amin'ny fihazana an'i Kevin Ryerson, izay nasongadina tao amin'ny bokin'i Shirley MacLaine, dia natolotra ihany koa. ateraka indray dia nahasarika ny mombamomba ny haino aman-jery tany India ary i Walter dia naseho tao amin'ny CNN-IBN tamin'ny Martsa 2006.
ateraka indray dia naneho hevitra avy amin'ny filoham-pirenena Indiana taloha, Abdul Kalam, ary i Shah Rukh Kahn, iray amin'ireo kintana filma sy televiziona indrindra ao India.
Walter koa nanoratra Ny niandohan'ny fanahy sy ny tanjon'ny fanambadiana. kosa Fiverenan'ny revolisionera ary ateraka indray Ireo tranga misy amin'izao fotoana izao izay mampiseho porofo mivaingana ny amin'ny fahaterahana indray ao amin'ny vatana vaovao, Fiandohan'ny fanahy dia manoritsoritra ny sary lehibe momba ny antony hiverenantsika indray sy ny toetry ny tontolo ara-panahy.
Walter nanolotra ny Society for Exploration Scientific (SSE), vondron'ny akademika izay mpisava lalana mpikaroka momba ny vatana vaovao Ian Stevenson, MD mpiara-pototra. Walter dia nandany andro niaraka tamin'ny Dr. Stevenson tamin'ny 2001 ary i Dr. Stevenson dia nanohana manokana ny maha-mpikambana an'i Walter ao amin'ny SSE. Walter dia mpisolovava amin'ny fikarohana nataon'i Ian Stevenson.
Dr. Semkiw dia mpandahateny tamin'ny Kongresy eran-tany efatra voalohany momba ny fitsaboana amin'ny laoniny, natao tany Pays-Bas, India, Brezila ary Torkia. Mpanolotra ihany koa izy tao amin'ny Parliament of the Religions of the World 2015 natao tao Salt Lake City, Utah. Araka ny voalaza, niseho tamin'ny CNN i Walter, ary koa fandaharana amin'ny fahitalavitra sy radio maro hafa, anisan'izany Coast to Coast. Nolazaina tao Herinandrom-baovao ary amin'ny fotoana maro ao amin'ny Times of India, izay manana ny famoahana lehibe indrindra amin'ny gazety amin'ny teny Anglisy eran'izao tontolo izao.
Amin'ny ankapobeny, Dr. Semkiw dia manam-pahaizana momba ny fikarohana momba ny firaisana amin'ny vatana vaovao, indrindra ny fitsanganana amin'ny maty ao amin'ny vatana izay mampiseho porofo mivaingana ny fiverenan'ny vatana vaovao.
Post Card avy any Kuwait: Fanohanana ny fanavaozana ny Fikambanana momba ny Fiterahana amin'ny Fiterahana indray izao tontolo izao